» Journey-Assist - Zvese zvaunoda kuti ufambe
Enda kune zvaunoda
Rwendo - Batsira
Nguva dzose nguva yakanaka yeRwendo rwakanaka
Kugamuchirwa kunzvimbo yedu yekufamba Journey-assist!
Basa redu nderekubatsira iwe pakuronga yakazvimirira famba! Kunyangwe ibasa kana nzendo dzedzidziso, thematic tours, kushanya kunotenga, kushanya kwemifananidzo kana kungo famba nechinangwa chekuzorora. Pano iwe unowana ruzivo rwese rwaunoda kuita izvi. Kutanga kubva mepu dzinopindirana nezvinokwezva uye kupera nezano uye kuongororwa kwevashanyi vane ruzivo, vane mafoto uye vhidhiyo mishumo.
Zvakare pane iyo portal iwe unogona kuwana yakakosha huwandu hweruzivo rwakakosha nezve nyika zhinji, zvinokwezva uye zvimwe zvinonakidza zvinhu mavari.
Kune kunyanya kutaurirana, iyo portal inopa mukana shambadza zvinyorwa zvako, goverana matipi ako uye hupenyu hacks, siya mhinduro yako uye nyaya dzekufamba.
Ruzivo rwekuronga yakazvimirira kufamba
Dzinonyanya kufarirwa nzvimbo dzekufamba
Zvinyorwa zvakaburitswa pano yakanyoreswa vashanyi kune yedu portal. Ehezve, chinyorwa chako kana ongororo inogona zvakare kuoneka pano. Zvinyorwa zvinosanganisira matipi anobatsira, mazano, tsananguro yenzvimbo dzinonakidza, ongororo uye zvinhu zvakadaro. Ehezve, isati yaburitswa, zvinyorwa zvese zvinovhenekerwa kuitira kukosha kwezviri mukati 🙂
Kuti ugadzire bhuku rako, enda kuaccount yako wega, kana kungobaya HERE 🙂
Vietnam Laos Таиланд
Zvese zvinyorwa pamusoro penyika dzeAsia
7 matunhu akanaka eTurkey
Turkey Inomwe Yakaisvonaka Matunhu Matunhu Zviri Mukati 7 muzana yenyika yakakura yeTurkey iri muAsia, iine matatu muzana yenharaunda yayo iri paBalkan Peninsula muSoutheast Europe, yakaparadzaniswa nenyika yese neBosphorus, Gungwa reMarmara uye Dardanelles. Turkey yakapoteredzwa neAegean, Nhema uye Nyanza yeMediterranean uye ine nzvimbo yakanaka yegungwa. Vazhinji ...
10 mahombekombe akanakisa muTurkey
Wepamusoro 10 Mabhishi muTurkey Tafura yezviri mukati Turkey inzvimbo dzekare dzetsika, vanhu uye nharaunda. Iine Eastern Europe kune rumwe rutivi uye Asia kune rumwe rutivi, Turkey yakagadzira nhoroondo yayo refu pasi pesimba rehushe, hukama hwetsika nemigwagwa yekutengeserana inopfuura napo. Nzvimbo dzayo dzepanyama uye mahombekombe ...
Izvo gumi zvakanakisa zveIstanbul Teki
Izvo gumi zvakanakisa zveIstanbul Turkey Tafura yezviri mukati Istanbul iguta rakanaka pakuchengetedza tsika nemagariro, richiasanganisa neguta rinonakidza rine zvakawanda zvekupa vafambi vanobva kumativi ese epasi. Yakavambwa munguva yeNeolithic, Istanbul nhasi iguta remazuva ano rinoramba riri rechokwadi kunhoroondo yaro yenhau kuburikidza nemasikiti ayo, basilicas uye ...
10 zviwi zvakakura muIndonesia
Indonesia zviwi zvihombe zviwi Zvinyorwa zvemukati Indonesia ndiro rakakura zviwi chitsuwa pasirese, riine zvisingasvike pasi pezviuru gumi neshanu zvakaputirwa nesango kubva kumahombekombe eAsia. Zvitsuwa zvishanu zvinoonekwa sezvakakura nekuda kwehukuru hwazvo, asi zvimwe zvacho zvakapatsanurwa pakati pezvitsuwa makumi matatu zvidiki zveIndonesia. Ini ndinopa iwe kutarira kwako zvitsuwa gumi zvikuru muIndonesia. gumi …
10 mahombekombe akanakisa pachitsuwa cheLombok muIndonesia
10 Best Beaches muLombok Island muIndonesia Zviri Mukati Vafambi vanouya kuLombok nekuda kwezvikonzero zvakawanda. Ivo vangangoda kuongorora zvakasikwa kana kudzidza zvakawanda nezve ino nharaunda inowanzova yechiMuslim yechitsuwa Vamwe vanongoda kuwona mamwe emahombekombe eLombok akanakisa, kupisa zuva uye pamwe nekurovera snorkeling, kudhizaivha uye kufefetera. Pane ...
Zvitsuwa gumi zvakanakisa muIndonesia
Indonesia gumi Zvakanakisa Zvitsuwa Tafura yezviri Mukati Indonesia iri pakati peIndia nePacific Oceans uye pamusoro peequator chete. Iyi nyika yakasarudzika ine anopfuura zviuru gumi nezvinomwe zvezvitsuwa. Zvitsuwa zvine mukurumbira zvakaita seJava, Sumatra neBorneo ndezvimwe zvakakurisa pasirese, asi zvidiki zvacho zvakakoshawo kushanyirwa. Kunyangwe zvisiri…
Kufamba-famba kutenderera Europe
United Kingdom Ukraine Czech Republic
Zvese zvinyorwa pamusoro penyika dzeEurope
Nzvimbo dzepamusoro gumi dzekushanyira kuEngland
Nzvimbo dzepamusoro gumi dzekushanyira kuEngland Zviri Mukati England inzvimbo huru yekushanyira, kunyangwe vafambi vari kuenda kwavo kwekutanga kana kwezana rwendo rwekunze. Izvi zviri muchidimbu nekuti hapana mutauro unodzivirira vatauri veChirungu, kunyangwe mitauro kubva pasi rese ichinzwika pano. Newbies ingangoda ku ...
Izvo gumi zvakanakisa zveLondon Great Britain
Izvo gumi zvakanakisa zveLondon United Kingdom Tafura yezviri mukati Zvinopisa, zvine simba uye zvine mutsindo London nderimwe remaguta makuru pasi rose ane huwandu hwevanhu mamirioni masere. Iri rinotungamira guta repasirese retsika, fashoni, zvemari, zvematongerwo enyika nekutengeserana, uye rinoramba riri rimwe remaguta anoshanyirwa zvakanyanya pasi rese nevashanyi vekunze Guta rine akawanda anozivikanwa mabhenji, uye ...
6 matunhu akanaka kwazvo muFinland
Zvikamu zvitanhatu zvakanakisa zveFinland Tafura yezviri Mune imwe yenyika dzekuchamhembe zvakanyanya pasirese, Finland inzvimbo huru yekuongorora, sezvo iri musha kumasango makuru uye nhamba inoshamisa yemadhamu akaumbwa mushure menguva yekupedzisira yechando, apo machira echando akaveza matunhu mazhinji enharaunda. Pamhenderekedzo yaro refu, iyo inoganhurana se ...
10 inonakidza nzvimbo muRomania
10 inonakidza nzvimbo muRomania Tafura yezviri mukati Romania, iri paBalkan Peninsula, inyika yemisiyano. Nyika yeyaimbova Eastern Bloc kwemakore mazhinji yaive yevaHungary, maOttomans nemaRoma, avo vakapa nyika zita rayo. Nyika izere nemadhorobha ekare echinyakare, nzvimbo dzekugara dzemakomo dzinopa mikana yakanaka kwazvo yekusvetuka, uye kukura ...
9 akanakisa matunhu eRomania
9 matunhu akanaka kwazvo eRomania Tafura yezviri mukati Romania, iri kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweEurope, ndiyo nyika yakakura kwazvo mudunhu rino uye inonyanya kugadzirwa nemakomo, zvikomo nemapani akazaruka, ayo Rwizi rweDanube runoyerera, rwuchienda kunzvimbo yakanaka yeGungwa Dema. Iwo anoshamisa maCarpathians anokwira pamusoro penharaunda yenyika, asi muchokwadi ...
5 maguta akanaka eCinque Terre. Itari
5 maguta akanaka eCinque Terre. Italy Tafura yezviri mukati Cinque Terre hapana mubvunzo kuti ndeimwe yenzvimbo dzakanakisa muItaly. Kushanyira kune chero ripi zvaro remataundi ake kunosimbisa izvi. Iyo Cinque Terre yakagadzirirwa kushongedza maposadhi. Mashanu emataundi aro ari kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweItari, pamakomo mawere uye mawere akakwirira anotarisana neGungwa reMediterranean ...
Zvese zvinyorwa nezve nyika dze Africa
Nzvimbo dzepamusoro gumi dzekuMorocco
Nzvimbo dzepamusoro gumi dzekuMorocco Zviri Mukati Humphrey Bogart naIngrid Bergman vanogona kunge vakapa nyika Casablanca, iro guta hombe munyika, asi Maroc ine zvakawanda zvekuona kupfuura iri rinokudzwa guta. Iyi yaimbova koloni yeFrance inopa vafambi mukana wekupinda mukati mehupenyu hwetsika dzekare dzechiArab neBerber, sunbathe pamahombekombe ...
Iwo gumi akanakisa ekuona kweMorocco & mamaki - TripAdvisor
Marokero eTop 10 Yekushanya Tafura yezviri MukatiMahombekombe egungwa reMorocco nenzvimbo dzinonakidza, dzine mahombekombe marefu, nzvimbo dzakakomberedzwa dzekuredza hove, oases akasvibira uye maAtlas High Mountains, anogona kunge achifadza vafambi. Wedzera kune izvi maguta eumambo eFez, Meknes neMarrakesh, nemienzaniso yavo yakanaka kwazvo yekuvaka kwekutanga kwechiIslam, uye iwe ...
10 mahombekombe akanakisa muMorocco
Wepamusoro gumi Moroccan Beaches Tafura Yezviri Mukati Mahombekombe eMorocco anomhanya achitevedza Atlantic Ocean kumadokero uye Gungwa reMediterranean kuchamhembe, zvinoreva kuti kune huwandu hwakawanda hwemabhichi ekushanyira nekunakidzwa. Kune dzakawanda nzvimbo dzinoyemurika dzevanofarira vafambi uye vekunze vanofarira, asi kwete ...
10 dzinoyevedza matembere ekare eEgipita
10 tembere dzekare dzinonakidza dzevaIjipita Egypt Zviri Mukati Nhoroondo yekuvakwa kwekare kweEgypt kunodzokera kumashure zviuru zvemakore. Tembere dzekutanga dzekuIjipita dzakavakwa chakatenderedza pakati pechina chemireniyamu BC uye dzaingova zvimiro zvine mutsindo. Tembere yekupedzisira, yaishandiswa nevaIjipita vekare nekuda kwechinangwa chayo, yakashanda setembere kusvika yezana ramakore rechitanhatu redu ...
10 nzvimbo dzakanakisa dzekushanyira muNamibia
Nzvimbo dzepamusoro gumi dzekushanyira muNamibia Tafura yezviri Kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweAfrica inogara kuNamibia, yaimbova koloni yeGerman yakawana kuzvitonga muna 10 chete. Namibia inozivikanwa neindasitiri yayo yemadhaimani uye yakasvipa tsika, pamwe nenhamba inoshamisa yezvinhu zvakasikwa. Kana yako pfungwa yezororo reroto inosanganisira akawanda anoshanda mafaro ...
Kufamba kuSouth America
Pamusoro gumi mabhishi muHonduras
Wepamusoro gumi emahombekombe muHonduras Tafura yezviri mukati Gungwa rakanaka rinogara rakanaka, kunyanya kana gungwa riri kune imwe nyika. Mhenderekedzo yeHonduras muCentral America haizokuodza moyo. Mhenderekedzo yegungwa yeHonduras ndeye 10 km (750 mi), yakakamurwa pakati penyika huru neCaribbean. Uine mahombekombe akawanda, une chokwadi chekuwana gungwa iro ...
Pamusoro 5 Zvitsuwa muHonduras
Pamusoro 5 Zvitsuwa muHonduras Tafura Yemukati Yakakomberedzwa neGuatemala, El Salvador, Nicaragua, Gungwa reCaribbean uye Pacific Ocean ndiyo nyika yeHonduras. Mainland Honduras ine zvakawanda zvekupa, uye maguta akaita seTegucigalpa neSan Pedro Sula inzvimbo dzemagariro. Nyika iyi zvakare ine mahombekombe makuru uye nzvimbo dzinoyevedza senge Kusuko National Park. Kunyange…
5 akanakisa matunhu eBrazil
5 matunhu akanaka kwazvo eBrazil Tafura yezviri mukati Brazil iri hofori yekuSouth America. Ndiyo nyika yakakura kwazvo mukondinendi uye nyika yechishanu pakukura pasirese. Iyo imba kune mamwe emaguta ane vanhu vakawanda uye ane mukurumbira pasi rose; kufanana neRio de Janeiro, uye munhu wese anogona kufungidzira iri rakakurumbira remahombekombe eguta. 5 yakanaka kwazvo ...
Iyo gumi yakanakisa Bolivia zvinotarisisa & zviratidzo - TripAdvisor
Bolivia Yepamusoro gumi Inokwezva Tafura yezviri Mukati Bolivia ndeimwe yenyika dzakakwirira uye dziri kure kwazvo pasi pano, mazhinji acho anoramba asina kubatika nenguva. Bolivia inogara kune vanhu vazhinji vemuno kupfuura chero imwe nyika muAmerica. Kune vafambi, Bolivia inopa musanganiswa wakasiyana siyana wezviitiko zvemarudzi akasiyana-siyana, nzvimbo dzakanaka dzepanyama uye nenjodzi dzakanyanya. Ndinofungidzira ...
10 nzvimbo dzakanakisa dzekushanyira muEcuador
Nzvimbo dzepamusoro gumi dzekushanyira muEcuador Yakatumidzwa zita reEquator iyo inotenderera pasirese, Ecuador inyika inopa chimwe chinhu kune wese munhu. Inotanga nekiromita imwe nehafu yezviuru zvemahombekombe ane mahombekombe akaisvonaka, uye kubva ipapo kuenda kuAndes uye masango emvura ebheseni rerwizi rwunoyerera kwazvo pasi rose - ...
Kufamba muCentral neNorth America
10 Yakakwira-Yakatarirwa Vashanyi Zviitiko muBelize
Wepamusoro gumi neBelize Yekushanya Tafura Zviri Mukati Fungidzira nyika ine mahombekombe anopisa, matombo ekorari, mafomu emapako, mhuka dzesango dzinoshamisa uye yakadzikama yeCaribbean vibe. Uye pamhenderekedzo yenyika ino ndiyo yechipiri pakakura yezvipingamupinyi pasi rose, uye matongo ematembere ekare akapararira musango rayo rese. Kana iwe uchifunga kuti yakadaro nyika ...
10 inonakidza nzvimbo muCosta Rica
Yakavakirwa pakati peNicaragua nePanama, Costa Rica ine huwandu hwakakura kwazvo hwepasi nemhuka kuwedzera kune nzvimbo dzakasiyana dzemakomo, mabani, masango, makomo anoputika, mabhishi, nyanza nenzizi. Kufamba napo hakuisiyi munhu asina hanya. Heino chiyero changu chevane gumi vanonakidza ...
Kufamba Australia neOceania
12 nyanza dzakanaka kwazvo muNew Zealand
12 emadhamu akanakisa eNew Zealand Tafura yezviri mukati Iri muPacific Ocean kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAustralia, New Zealand inoumbwa nezvitsuwa zviviri zvikuru uye inozivikanwa nemakomo ayo marefu uye inoshamisa nharaunda. Mazhinji epasi pazvitsuwa inzvimbo yemapaki emunyika, kunyanya kuSouth Island, uko kunenge kwese kumadokero kwegungwa pamwe ...
30.10.2020 / rem / Australia neOceania, New Zealand / Makomendi pamadziva gumi nemaviri akanaka kwazvo muNew Zealand kwete
7 akanakisa ezuva anofamba kubva kuQueenstown Nyuzirendi
7 akanakisa ezuva anofamba kubva kuQueenstown New Zealand Tafura yezviri Mukati Queenstown idhorobha diki rekushanyira muNew Zealand riri pamhenderekedzo yeLake Wakatipu uye vachizvirumbidza nekuona kunoshamisa kwemakomo ane chando-akavharwa. Kwete kare kare, yaizivikanwa zvakanyanya senge ski resort, asi ikozvino mamiriro ezvinhu achinja zvakanyanya ...
29.10.2020 / rem / Australia neOceania, New Zealand / Makomendi pamusoro penzendo dzemazuva manomwe kubva kuQueenstown. Nyuzirendi kwete
16 akanakisa matunhu eNew Zealand
16 nzvimbo dzakanakisa kwazvo dzeNew Zealand Tafura yezviri Imwe yenyika dzakanakisa pasi rose, New Zealand muOceania izere nezvinokatyamadza zvakasikwa. Makomo mazhinji nemakomo emakomo anokwira pamusoro pemahombekombe akareba uye anoyevedza ane mipata yakaorera, nyanza dzinoyevedza nenzizi dzinozadza nyika yakaropafadzwa iyi. Kunyangwe nzvimbo zhinji yenyika ine North Island ...
29.10.2020 / rem / Australia neOceania, New Zealand / Makomendi kumatunhu gumi nematanhatu akanaka kwazvo eNew Zealand kwete
10 zvinonakidza zvinhu zvekuita muNapier. Nyuzirendi
10 zvinonakidza zvinhu zvekuita muNapier. New Zealand Zviri Mukati Guta diki reNapier riri paNorth Island, iri kumahombekombe ekumabvazuva kweNew Zealand rinotarisana nePacific Ocean, inzvimbo yakanaka kwazvo uye inonakidza yekutandara kunofadza. Napier, inozivikanwawo se "Art Deco Guta reNyika", izere nezvivakwa zvinoyevedza zvinoratidza musiyano wekuvaka; zvimwe ...
27.10.2020 / rem / Australia neOceania, New Zealand / Makomendi kunyora zviitiko gumi zvinonakidza muNapier. Nyuzirendi kwete
9 zvakanakisa zvinhu zvekuita muNelson. Nyuzirendi
9 zvakanakisa zvinhu zvekuita muNelson. New Zealand Tafura yezviri Mukati yakamhara pamhenderekedzo dzinoyevedza dzeGulf yeTasman, guta reNelson riri munzvimbo inonakidza inoshamisa yeNew Zealand, yakakomberedzwa nemapaki anoshamisa emusango. Kugara kwekare kwazvo munyika, guta iri rakavambwa muna 1841 naIshe Admiral Nelson, uyo akatumidzwa zita rake. Guta, rine zita remadunhurirwa rerudo ...
27.10.2020 / rem / Australia neOceania, New Zealand / Makomendi pane izvo 9 zvakanakisa zvinhu zvekuita muNelson. Nyuzirendi kwete
9 akanakisa ezuva nzendo kubva kuAuckland. Nyuzirendi
9 akanakisa ezuva nzendo kubva kuAuckland Zviri muNew Zealand Zviri mukati Auckland, iro guta hombe muNew Zealand, rine zvakawanda zvekupa. Imba kune yakakura nyika yevaPolynesia. Iyo yakavakirwa pane inoshingaira basalt volcanic munda - iro chete guta rakadai pasirese. Iyo ine yakanakisa mamiziyamu, iyo hombe marina mune yekumaodzanyemba hemisphere uye ...
27.10.2020 / rem / Australia neOceania, New Zealand / Makomendi Enda kune 9 akanakisa ezuva ezuva kubva kuAuckland. Nyuzirendi kwete
Mapaki gumi nemaviri akanaka kwazvo muChina
China ane gumi nemaviri mapaki emunyika akanakisa Tafura yezviri mukati Mapaki emunyika zvimwe hachisi chinhu chekutanga chinouya mupfungwa kana iwe uchifunga nezveChina. Nekudaro, nyika ino ine anopfuura mazana maviri mapaki akasarudzika emunyika. Mumakore achangopfuura, hurumende yeChinese yakaedza chaizvo kuwedzera nyika park system. Kunyanya kuripa kusvibiswa, ...
10 nzvimbo dzinoshamisa kwazvo kumabvazuva kweChina
10 Nzvimbo Dzinoshamisa Kwazvo muEastern China Tafura yezviri Mukati China inyika yayo yega. Iine nhoroondo yakapfuma, mamwe maguta apfuura makore zviuru zvitanhatu. Kwemazana emakore, kumabvazuva kweChina kwakagadzira mamiriro ekunyaradza uye ekuzorodza mweya. Kumabvazuva kweChina kunofadza pfungwa dzako dzese: kubva kumaguta emvura anoyevedza, akayambuka nemigero izere nekufamba zvishoma nezvishoma ...
10 nzvimbo dzinoshamisa kwazvo kuchamhembe kweChina
Wepamusoro 10 Nzvimbo Dzinonyanya Kushamisa muNorth China Zviri Mukati Iyo People's Republic of China inyika yakakura uye yakasiyana. Nekuda kwehukuru hwayo, hazvigoneke kuti uone zvese mune imwe rwendo, asi kune zvinonakidza zvinotaridza pasirese. North China ndiyo sarudzo yakanakisa yekutanga vafambi.North China ndiyo nzvimbo yaunowana ...
10 nzvimbo dzinoshamisa kwazvo kumaodzanyemba kweChina
10 Nzvimbo Dzinoshamisa Kwazvo muSouth China Zviri Mukati China neUnited States vanofukidza ingangoenzana ivhu rakaenzana, asi China inogara kune vangangoita bhiriyoni vanhu. Kufamba nemunyika yakakura iyi kunogona kuoma. Asi zvinozoita zviri nyore kana iwe uchinge wakakamura nyika ino kuita zvidimbu zvidiki maererano ne ...
Zvishoma zvinozivikanwa chokwadi nezveGreat Wall yeChina
Zvishoma zvinozivikanwa chokwadi pamusoro peGreat Wall yeChina Great Wall yeChina. Chimwe cheZvishamiso Zvitsva Zvepasi The Great Wall yeChina, iyo inosanganisirwa mune rondedzero yeNew Seven Zvishamiso zveNyika, ndechimwe chezvivakwa zvine mukurumbira pasi rese, asi panogona kunge paine zvinhu zvishoma zvausingazive nezvazvo.Rusvingo runomhanya nemumaruwa eChina rwakazara pa…
Isu tinofamba tichiyambuka Russia, Ukraine, Belarus
10 inonakidza nzvimbo dzekushanya muRussia
Wepamusoro gumi Kwakanakira Kufarira muRussia Zviri Mukati Nyika yakakura kwazvo pasi rose, Russia inopa akasiyana zviitiko zvevafambi. Kubva pakukwidza materu emakomo ane glaciated kuenda pakufamba pamhenderekedzo yegungwa rekare pasi pano. Nhoroondo nzvimbo uye zvetsika zviitiko zvinowanikwawo mumaguta makuru emunyika. Izvo hazvina basa kana iwe ukaongorora iyo ndima ...
10 inoshamisa nzvimbo kumabvazuva kweRussia
10 dzinonyanya kushamisa nzvimbo kumabvazuva kweRussia Tafura yezviri mukati Vazhinji vevashanyi vanoenda kuRussia vanopedza nguva yavo kumadokero kwenyika. Maguta akaita seMoscow neSt. Petersburg ane zvakawanda zvekupa, asi usarasikirwa nezvose zvinowanikwa kumabvazuva kweRussia. Ino inzvimbo kana iwe uchifarira hutsinye hunhu, kubva kuRussia Far East ...
Zvokuita muOmsk. Rashiya
Zvokuita muOmsk. Russia Zviri Mukati MuRussia, muchikamu chekumaodzanyemba kweWestern Siberia, panosangana rwizi Irtysh nerwizi rwayo rwerudyi, rwunonzi Om, guta remiriyoni imwe rinowanikwa zvakanaka - Omsk.Kune kugara kumadokero kweSiberia, sarudzo yekutenga furati muOmsk ndiyo inogona kunge iri inonakidza kwazvo. Kune iro guta rakanyatso kukodzera chaizvo ...
Zorora muCrimea Zviri Mukati Sangana - Crimea! Chii chinotanga kuuya mupfungwa kana uchifunga kwekushandisa zororo rako? Ehe - Crimea! Chii chinonzi Crimea? Chekutanga, Crimea ipfuma uye inoitika nhoroondo. Genoese, maGiriki, maTatar, maRussia, maUkraine. Izvi zvinoreva kuti kune maratidziro enhoroondo - nhare, dzimba dzemamongi, dzimba dzemamongi, ...
Dzhubga yekutandarira musha. Krasnodar nharaunda. Rashiya
Dzhubga yekutandarira musha. Krasnodar nharaunda. Russia Zviri Mukati Pfupiso pfupiso Ndingade kukuudza nezve unozivikanwa, kunyangwe uri mudiki musha weZhubga.Inowanikwa zvakanaka, mumuromo unodziya werwizi rwezita rimwe chete, urwo runoyerera kupinda muGungwa Dema. Zvakaitika kuti avo vanofamba kuenda kuGungwa Dema vachitevedza mugwagwa M-4 vanopfuura nemumusha uno, kunge nepasefa. ...
Kufamba uchitenderera Bali
7 zviwi zvekunze zveNusa Tengara. Indonezhiya
7 zviwi zvekunze zveNusa Tenggara. Indonesia Zviri Mukati Mazana ezvitsuwa anotambanuka kumabvazuva kweBali anozivikanwa pamwechete seNusa Tenggara, dunhu riri kumabvazuva kweIndonesia iro riri kuramba richikurumbira nzvimbo yekufamba. Zvimwe zviwi zvinozvirumbidza iwo iwo mahombekombe akanaka anokwezva vashanyi kumuvakidzani wavo weBalinese ...
25.09.2020 / rem / Asia, Indonesia, Kufamba uchitenderera Bali / Makomendi kurekodha 7 zvisikwa zvekunze zveNusa Tengar. Indonezhiya kwete
10 zvitsuwa zvakanakisa padyo neBali
10 Zvizhinji Zvitsuwa Zvakanakisa Pedyo neBali Tafura yezviri mukati Bali, inozivikanwawo seChitsuwa cheVamwari, ndiyo inonyanya kufarirwa kuenda kuIndonesia. Kubatanidza nhoroondo inoshamisa pamwe neyakajairika tsika yemweya, Bali ine chimwe chinhu kune wese munhu anoshanya. Uye zvakanyanya kukosha, chitsuwa ichi chakanyanya kunaka, chine zvese kubva ...
25.09.2020 / rem / Asia, Indonesia, Kufamba uchitenderera Bali / Makomendi pazvitsuwa gumi zvakanakisa padyo neBali kwete
Bali mahotera gumi akanakisa
Wepamusoro 10 Mahotera muBali Tafura yezviri mukati Bali pasina mubvunzo sarudzo yakanakisa yekugara muIndonesia.Mazhinji emahotera emahotera pachitsuwa anogona kuwanikwa muKuta, kunoenda vashanyi vazhinji. Zvisinei, runyorwa urwu rune nzvimbo dzakanakisa dzekutandarira muBali sezvakarongwa nevashanyi. yakamisikidzwa muNusa Dua, Seminyak uye Ubud. Mahotera eUbud uye nzvimbo dzekuchengetedza dzakanakira ...
24.09.2020 / rem / Asia, Indonesia, Kufamba uchitenderera Bali / Makomendi pane iwo gumi akanakisa mahotera muBali kwete
Rwendo rwedu kuBali
Rwendo rwedu kuBali Zuva 1 Kusvika muDenpasar kuma2 pm. Yedu Bali Hyatt hotera yakatitumira tekisi ine inoshamwaridzika mutyairi 🙂 uye takafambisa kuenda kuSanur kweinenge hafu yeawa .. kuBali Hyatt yedu. Isu takabva tafarira Sanur ... uye idzi dzimba dzakanaka uye, chokwadika, yakanakisa mamiriro ekunze muBali ...
11.09.2020 / ngirozi / Asia, Kufamba uchitenderera Bali, Kuongorora kwakatendeseka / 3 comments parwendo Rwedu kuBali
Tarisiro yesimba rezuva munyika
Tarisiro yesimba rezuva munyika Zuva rinopa nyika yedu simba rakapetwa kazana nemazana gumi neshanu pane gore roga roga rinopedzwa nevanhu. Zvakanakira simba rezuva ndere kuwanikwa kwese uye kusingaperi, pamwe nekuchengetedza kwenzvimbo dzemagetsi ezuva kune zvakatipoteredza. Parizvino, ingangoita nzira gumi dzekushandura mwaranzi yezuva dzakagadzirwa uye dzakashandiswa (pamatanho akasiyana) ...
15.01.2021 / ngirozi / Chokwadi chinofadza, anobatsira mashoko / Makomendi pane Zvitarisiro zvesimba rezuva munyika kwete
6 mapaki emvura emukati epasi rese
Iwo mapaki matanhatu emvura epamusorosoro epasi rose Tafura yezviri Mukati mwaka unodziya paunopera munzvimbo yako, inogona kunge iri pfungwa yakanaka kutanga kutsvaga mapaki emvura anogona kugara akavhurika gore rese uye asingakanganiswe nemhepo nemvura. Mapaka mazhinji emvura emukati anofarira kuzivisa kukura kwawo uye kuti ari mumba sei - mapaki emvura ku ...
21.12.2020 / rem / Mapaki emvura, Chokwadi chinofadza / Makomendi pamapaki matanhatu emvura epamba pasi rese kwete
8 nzvimbo dzinochengeterwa mhuka hombe pasi rose
Iwo masosi makuru masere epasi Tafura yezviri mukati Saka ndeapi zoo ari akakurisa pasirese? Mhinduro kumubvunzo uyu inoenderana nezvinoshandiswa neshoko rekuti “hombe”. Isu tinoyera huwandu hwehutapwa hwemhando kana iyo yakazara nzvimbo yeiyo zoo. Kana isu tikangotarisa chete chechipiri chinhu, saka iyo Red McCombs Wildlife Zoo ...
19.12.2020 / rem / Matongo, Chokwadi chinofadza, anobatsira mashoko / Makomendi kutora zvinyorwa zvinomwe zvisere pasi rese kwete
10 inonakidza nzira dzeherikoputa munyika
Yepamusoro gumi Inonyanya Kufadza Helicopter Nzira muNyika Tafura yezviri Helicopter ndege dzinongopa vashanyi maonero akasarudzika eguta kana nharaunda, asi zvakare chiitiko chinonakidza uye chinonakidza. Uye zvakare, kutarisa kweherikoputa kazhinji ndiyo nzira chete iyo vashanyi vanogona kunakidzwa nekutarisisa nzvimbo dziri kure dzedunhu iri. Semuenzaniso, 10 muzana Hawaiian ...
19.12.2020 / rem / Chokwadi chinofadza, anobatsira mashoko / Makomendi pane gumi dzinonyanya kufadza maherikopta nzira munyika kwete
10 masvingo ane mukurumbira pasi rose
10 yemasvingo ane mukurumbira pasi rose Tafura yezviri mukati Masvingo akavakwa kubva panguva dzekare kutsanangura miganhu yekuchengetedza vavengi kana zvimwe zvinangwa kunze. Munguva pfupi yapfuura, madziro akavakwawo seyezvivakwa uye zvivakwa zvehunyanzvi. Asi kunyangwe zvodii chinangwa chavanoshandira, madziro anotonga iwo mamiriro kwese kwavanomira ...
15.12.2020 / rem / Chokwadi chinofadza / Makomendi pamadziro gumi ane mukurumbira pasi rese kwete
25 mabhiriji anotyisa kwazvo pasirese
20 emabhiriji anotyisa kwazvo muPasi Tafura yezviri Mukati Kunyangwe mabhiriji akagadzirirwa kutipa nzira yakachengeteka yekuyambuka chipingamupinyi munzira yedu kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe, mamwe acho anofanirwa kudzivirirwa zvakanyanya kuitira kuchengetedzeka kwako. Kuyambuka vamwe, izvi zviri kure nekufamba mukati ...
05.12.2020 / Mazalya / Chokwadi chinofadza / Makomendi pamabhiriji 25 anotyisa kwazvo pasirese kwete
Munhu wese anonyepa
Ivo vari kutinyengedza sei ini ndoda kugovana ruzivo rwangu rwekushandisa ongororo yehotera Kuverenga aggregator, pamwe neGoogle Ongororo sevhisi. Heano maitiro azvaive. Mwaka uno wechando (2020), ndakaenda nendege kuSri Lanka, ndikanogara imomo muhotera yakatonyorerwa kare. Ihotera yacho yakasarudzwa zvakaringana zvichibva pakuongorora, mapikicha, uye fungidziro yeavo vanofungidzirwa kuva vechokwadi vashanyi. Ruzivo urwu rwakawanikwa kubva ...
12.09.2020 / Roma / Asia, Без рубрики, Hotels, Kuongorora kwakatendeseka / 6 comments pane Munhu wese anonyepa
Kwete zvinyorwa zvakawanikwa.
Makereke masere akanaka kwazvo muRoma Itari
Izvo gumi zvakanakisa zveOslo zvinokwezva Noweyi
Makereke gumi akanaka kwazvo emapuranga muNorway
Iwo gumi akanakisa ekuona eNorway & zviratidzo - TripAdvisor
10 akanakisa mapaki emunyika muNorway
Kuziva runako rweLofoten Islands muNorway
5 akanakisa fjords muNorway
6 matunhu akanaka kwazvo muNorway
Masitepisi 12 + 1 anotyisa kwazvo munyika
7 Zvishamiso zveGirisi Yekare
10 anonyanya kuzivikanwa mamaki muPoland
Mazhinji nzvimbo dzisiri pasi pezororo kuGreek
Kirillovka. Zorora paGungwa reAzov. Ukireni
10 zviwi zvakakura muGirisi
7 yakanaka kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kwezviwi zveAegean. Girisi
Zvitsuwa zvina zvakanakisa muSporades. Girisi
13 matunhu akanaka kwazvo eGirisi
11 zviwi zvakanaka kwazvo zveDodecanese Girisi
10 akanyanya mahombekombe kuGreek
7 akanyanya kunaka zviwi zveIonia Girisi
Wepamusoro Zvinhu gumi zvekuita muSantorini Greece
Inoshamisa imba yamambo yeKnossos kuCrete chitsuwa kuGreek
10 zvinonakidza zvekuona zveKrete Girisi
Iwo gumi akanakisa eTesaloniki zvinokwezva Girisi
10 zvinonakidza zvinotaridzika muPeloponnese Girisi
Zvitsuwa zvinonakidza zviri pedyo neAtene Girisi
10 zvinonyanya kufarirwa muMykonos Girisi
10 zvinonyanya kufarirwa muCorfu Girisi
Iyo gumi yakanakisa Rhode zvinokwezva Girisi
6 anoyevedza mamonari muMeteora Girisi
Mepu dzenyika dzevashanyi
Mepu dzinopindirana dzenyika dzepasi
Ndichikuzivisa iwe mepu dzenyika, ine zvinoratidzirwa zvekushanya uye zvimwe zvinonakidza uye zvakakosha zvinhu. Mepu dzinopindirana zvizere, zvine mapikicha uye tsananguro yezvinokwezva, rutsigiro smart search, SERP kurongedza uye kuzere kufamba... Vashanyi vakanyoreswa pane saiti vane mukana kune epamberi mashandiro emakadhi - kuwedzera ako mamaki, kufamba, nzira uye zvimwe zvakawanda. Zvakare zvaunazvo mepu dzemasaiti anoshanda mamepu emamiriro ekunze nerutsigiro rwekufungidzira.
General Mepu yeThailand Zvinonakidza
Zvese nezveSri Lanka
Madunhu uye nzvimbo dzekushanya dzeSri Lanka
Mamiriro ekunze eSri Lanka
Bali. Mepu inofambidzana yezvinokwezva uye mahombekombe
Java. Mepu inofambidzana yezvinokwezva uye emabhichi
General mepu yezvinokwezva uye mahombekombe
Vietnam mamiriro emepu
General mepu yezvinokwezva uye mahombekombe eSingapore
Mamiriro ekunze muSingapore
General mepu yezvinonakidza uye mahombekombe eIndia
Mamepu emamiriro ekunze muIndia + zvirevo
Mazano anoshanda kune vafambi. Hupenyu hacks
Zvayakanakira nezvayakaipira. Mhepo, Gungwa, Njanji, Auto ...
Maitiro ekuchengetedza parwendo rwemhepo
Mhepo Yekutakura Mitemo
Kusarudza hotera. Matipi
Chii chausingakanganwe parwendo
Isu tinounganidza zvombo nemazvo
Kuzvidavirira kwendege. Kuwedzeredza. Airhelp
Isu tinowana pakufamba
Photo Monetization Mapurogiramu
Zvinyorwa zvitsva pane portal
Enda kune peji
14.11.2020 / Makomendi paRwizi cruises kwete
Chakavanzika gungwa. Bias Tugel Gungwa muBali
26.10.2020 / Makomendi paChakavanzika Gungwa. Bias Tugel Gungwa muBali kwete
Sanur Beach muBali. Indonezhiya
25.10.2020 / Makomendi paSanur Beach muBali. Indonezhiya kwete
Pandawa gungwa kuBukit. Bali
25.10.2020 / Makomendi paPandawa pamhenderekedzo yeBukit. Bali kwete
Padang Padang pamhenderekedzo muBali. Indonezhiya
25.10.2020 / Makomendi paPadang Padang pamhenderekedzo muBali. Indonezhiya kwete
Mushroom Gungwa. Lenbongan Chitsuwa. Bali
22.10.2020 / Makomendi paMushroom Beach. Lenbongan Chitsuwa. Bali kwete
Lembeng Beach muBali. Indonezhiya
22.10.2020 / Makomendi paLembeng Beach muBali. Indonezhiya kwete
Kutsvaga panzvimbo yepaiti
Nusa Cheningan Chitsuwa, Bali. Indonezhiya
Menjangan Chitsuwa muBali. Indonezhiya
Nusa Lembongan Island. Bali. Indonezhiya
Nusa Penida chitsuwa. Bali. Indonezhiya
Chiitiko - kushanya
Gastronomic and wine tours
Kwakadzika kwegungwa kushanya
Kurapa uye Kunaka
Tsvaga. Mhepo neHotera
North uye Central America
Kunyoresa pane iyo portal Journey-assist.com
Haisi nguva yekuti tifambe here?! ;)
wedzera Journey-Assist kune Homescreen yako!
Achimuka mamwe mangwanani mushure mekurara zvisina zororo, Gregor Samsa akaona kuti akange achinja kuita chipembenene chinotyisa pamubhedha wake.